NetBase: Enterprise Yemagariro Njere Platform | Martech Zone
Svondo, July 22, 2012 Chitatu, Nyamavhuvhu 6, 2014 Douglas Karr
NetBase, yaimbove Accelovation, ndeye bhizinesi rezvehungwaru rezvemagariro rinotendera vatsvagiri vepamusika kuyera kwavo kushamwaridzana kwenhau.
Iyo Net Base Monitoring Platform inopa vashambadzi neiyo chaiyo-nguva yekutarisa uye ekuyera maturusi ayo anopa nekukurumidza uye nekudyidzana nzwisiso mune izvo zvinotyaira vatengi maonero uye maitiro. Iyo NetBase Insight Workbench inopa vanotsvaga musika ne seti ye analytics, machati nematurusi ekutsvagisa.
Heino muenzaniso weNetbase's BrandPassion Index, inoshandiswa kuona kukwikwidza kuongororwa kwechiratidzo (nemuenzaniso wakanaka wekutenga pazororo kune vatengesi vakuru):
CustomerBase, yekupedzisira yekupedzisira chishandiso panoshanda neSocial Intelligence Platform, inokambaira mambure, inonongedza mwedzi yapfuura gumi nemaviri yekuita online, uye inosimbisa iwo mafungire emafungiro, maonero, uye maratidziro, kupa maonero anoitika.
Musiyano wakakosha kubva kune mamwe maturusi akafanana kugadzirwa kwemitauro. CustomerBase inosanganisa mira-mazwi zvakaita se nekuti, by, nokuti or pashure iyo Google nedzimwe tsika dzekutsvaga dzinoteerera. Kubatanidzwa kwakadaro kunotendera kujekesa mamiriro pamwe nemanzwiro chaiwo, zvichibvumira kuti uve nemaonero ari nani. A kesi mune poindi: Google yaizotenga kupisa ine chirevo chisina kunaka, asi CustomerBase yaizofunga kupisa muchiedza chakanaka kana mutsara wacho uchishandiswa muchirevo chekugeza muromo.
Yechipiri huru USP ihwo huwandu hwedata. Mwedzi gumi nemiviri yekuita basa yakaenzana mabhiriyoni makumi maviri eruzha mabheti kubva kumadhora anodarika mabhiriyoni manomwe emadhijitari. Iyo kambani inoti inonongedza makumi mashanu emitsara paminiti kubva kunzvimbo senge veruzhinji-vakatarisana neFacebook, mablog, maforamu, Twitter uye nzvimbo dzekudzokorora kwevatengi.
Vashambadziri vanogona kushandisa NetBase sechishandiso chekutsvaga mumusika, kuongorora vezvenhau, kana kuwedzera kudzoka kwavo pasocial investa. Kubva kwavo saiti:
Ita nekukurumidza kosi kururamisa izvo kuwedzera mushandirapamwe kubudirira uye zvichikonzera mari. Kana izwi rezvemagariro richikutaurira nekukasira kuti mishandirapamwe yako iri kubudirira uye nei vari kunetseka, unogona kuita kunatsiridza kudzoka pamari yekushambadzira.
Wedzera mushandirapamwe unosvika kudoma makuru anokurudzira uye tarisiro. Iwe unoziva kune "social VIPs" kunze uko - vanhu vane manzwi avo anonzwika sezvavanoudza zviuru zvevateveri nezvechako chako uye vakwikwidzi vako. Ziva chaizvo zvavari uye uvape zvimwe zvikonzero zvekuita. Dzidza ZVIMWE.
Gadzira zvigadzirwa zvitsva zvinobudirira ne inoshanda kuongorora vatengi 'kugamuchirwa kune chigadzirwa chitsva sezvo chinopinda mumusika uye nekuendesa nekukurumidza, zvakabatana mhinduro kumatambudziko nezvichemo zvingamuka. Verenga zvimwe nezve yedu nyowani chigadzirwa kuburitsa yekutevera mhinduro.
Chengetedza hutano hwe brand kazhinji. Gadzira zvirinani zvisarudzo zve brand uye mhanyisa mhinduro kune kutyisidzirwa kwechiratidzo neyakagadziriswa seti yeKPIs kuyera uye kugadzirisa hutano hwemagariro munharaunda chaiyo-nguva. Verenga zvakawanda nezve yedu yemhando yekuongorora mhinduro. Kuti uone mashandiro anoita hutano hwehukama kune chaiwo-epasirese matambudziko ebhizinesi, verenga kuongorora kwe Starbucks pane yedu blog.
Fanozivisa zviito zvemukwikwidzi uye pindura nekukurumidza kune zvekutyisidzira zvemakwikwi nekukasira, chaiko-nguva ongororo pamakwikwi anokwikwidza. Dzidza zvakawanda uye ona yedu Brand Passion Index mukuita pane iyo NetBase blog.
Nzwisisa kudzika kwemagariro kumisangano, kuti uite zvisarudzo zvine ruzivo. Ona yedu blog kuti udzidze zvakawanda nezvekuti iyo Wall Street Journal inoshandisa sei NetBase yeayo vhiki nevhiki manzwiro tracker mushumo.
Ita zvakawanda nebhajeti rako riripo uye zviwanikwa. Mhinduro dzeNetBase dzinongoerekana dzagadzirisa uye nekugadzirisa magariro enhau muzvikamu zvinobatsira uye metric. Panzvimbo pekugadzirisa nemaoko kuburikidza nezviuru zvemashoko, zviwanikwa zvako zviripo kuti zvishande mukuvandudza mishandirapamwe.
Ive neshuwa yekubata shamwari yedu, Jason Falls, arikuita Social Smarts Webinar yeNetbase muna Nyamavhuvhu 15, 2012: Iyo KISS Maitiro kune Dhijitari Kushambadzira Kubudirira.
Tags: bhizinesi rehungwaru munzangamashandiro enharaunda enjerenetbasechaiyo-nguva yekutarisamukurumbira manejimendizvemagariro analyticshuchenjeri hwemagarirokuyerwa munharaundakubatana kwenhau
Jul 23, 2012 pa 1: 22 AM
Paunotenga Facebook Fans huwandu hwevashanyi kune peji rako senge saiti yako inowedzera, zvichiita kuti iwe ushandise zvakanyanya veruzhinji social network kuti uwedzere mari. Huwandu huri kuramba huchikura hwevanhu pari zvino vanoshandisa nzvimbo dzeveruzhinji pasocial network mukutenga kubatanidza neshamwari nemhuri. Nenhamba inoshamisa yevatengi vanovhura network zuva rega rega, une mukana usingagumi wekuratidza kambani yako, masevhisi uye zvinhu kune vangangove vatengi pasi rese.